Ma ciidan la’aan baa carruurta u geysay Al-Shabaab? | Raadgoob
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in kooxda Alshabaab ay si xoog ah ku uruursanayso carruuraha dadka dhalay ee deegaanada ay ka taliso kooxdan.
Hay’adda ayaa farta ku fiiqday deegaano ka mid ah Bay iyo Bakool sida Bardaale oo kale.
Waxaa jirta tuulo lagu magacaabo Buulo Fulay oo carruurta la’isu geeyo, halkaas oo lagu baro manhaj cusub oo waxbarasho oo Shabaabka soo rogeen, waxaa sidoo kale tuulada ka furan xerooyin ciidamo lagu tabobaro.
Carruurta la uruurinayo ayaa waxa ay da’doodu u dhaxaysaa 7 jir illaa 15 jir, iyada oo haddii ay waalidkood diidaan in ay dhiibaan ay la kulmayaan ciqaab adag.
Mid ka mid ah macalimiinta iskuulaadka maxaliga ah oo meeshiisa loogu yimid , markii dambane soo cararay ayaa ka sheekeeyay wixii uu la kulmay “Fasalka ayay iigu yimaadeen, waxa ay rabeen 25 caruur ah oo da’doodu u dhaxayso 8 illaa 15 sano, ma aysan sheegin sababta ay u rabaan, kadib waa ay i garaaceen carruurta hortooda, carruurtii qaar ayaa ooyay, kadibna meesha ka cararay, wey soo qabteen, waana gaaraaceen carruurtii” ayuu yiri.
Dowladda Soomaaliya ayay hay’adda sheegtay in ay qaaday talaabooyin lagu xaqiijinayo badbaada carruurta, waxaana ka mid ah in ay saxiixday qaraarka caalamiga ah ee difaaca xuquuqda carruurta, inkasta oo sharcigaas uusan wali baarlamaanka meelmarinin.